Nzira yekuwedzera maProfiles kuAmazon Prime Vhidhiyo Chikumbiro | IPhone nhau
Maitiro Ekuwedzera Maprofiles kuAmazon Prime Vhidhiyo App
Iwo profiles ari kutenderera evhidhiyo mapuratifomu akakodzera kune wega mushandisi ku gadzira yako yemhando zvinyorwa uye kuti sevhisi inogona kukutumira iwe kurudziro zvinoenderana nezvinodiwa nemushandisi, manakiro akavakirwa pane akateedzana uye mabhaisikopo aakatarisa kusvika zvino.
Amazon Prime Vhidhiyo, yeAmazon inoshambadzira vhidhiyo sevhisi, inosanganisirwa mubhadharo wepagore we36,5 euros iyo inobhadharwa kuve Prime Prime mushandisi, yanga ichikura mumakore apfuura, kuwedzera zvemukati zvemukati izvo zvisina chazvinoitira kune mamwe mapuratifomu, asi zvakare nhevedzano iyo kusvikira zvino yakanga isingawanikwe pane chero kumwe kudirana kwevhidhiyo chikuva (X-Mafaira kudoma nyaya ichangoburwa).
Amazon yakazivisa mwedzi mishoma yapfuura iyo akawedzera iyo sarudzo yekugadzira mushandisi profiles paAmazon Prime, asi kuvhurwa kwayo kwave kunonoka kupfuura zvaitarisirwa. Tinogona kugadzira profiles kubva pawebhusaiti kana kubva kuApplication, asi muchinyorwa chino tinotarisa pane sarudzo yekugadzira profiles paAmazon Prime kubva ku iPhone.
Ese ma profiles atinogadzira kubva kuApplication application kana kubva pawebhusaiti anowanikwa pane webhusaiti, mukushandisa uye kunyangwe mukushandisa kweimwe ecosystem, kuwedzera kune yeFire Stick TV yekambani.
Maitiro ekugadzira profiles paAmazon Prime Vhidhiyo
Kana tangovhura iyo application, isu tinowana iyo menyu Zvinhu zvangu.
Mukati meZvinhu Zvangu, zita redu rinoratidzwa semushandisi webasa rakabatana neAmazon Prime Vhidhiyo, zita uye zita rekushandisa ratisingakwanise kugadzirisa kana kudzima.
Kuwedzera chimiro chitsva, tinya zvakare uye tinonyora zita remunhu anozoishandisa. Kana ari mwana, uye isu tichida kusefa izvo zvirimo, isu tinofanirwa kumisikidza switch Is ichi chimiro chemwana?
Pakupedzisira tinobaya Chengetedza.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » IPhone maapplication » Maitiro Ekuwedzera Maprofiles kuAmazon Prime Vhidhiyo App
Apple haibvumidze vashandisi ve iPhone ne iPad kunakidzwa nekutamba mutambo mapuratifomu
Apple TV + ichawedzera nyowani yekuita nhevedzano yakaburitswa naRobert Downey Jr.